Andros Townsend oo ka hadlay Sababta uu u Sameeyay dabaaldegga Cristiano Ronaldo | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Andros Townsend oo ka hadlay Sababta uu u Sameeyay dabaaldegga Cristiano Ronaldo
Andros Townsend oo ka hadlay Sababta uu u Sameeyay dabaaldegga Cristiano Ronaldo
Ciyaaryahanka garabka kaga ciyaara Toffees ee Andros Townsend ayaa dhameystiray weerar rogaal celis ah qeybtii labaad isagoo sameeyay debaaldaga Ronaldo.
Andros Townsend ayaa sheegay inuu u soo guuriyay dabaaldeggii Cristiano Ronaldo si uu ugu muujiyo ixtiraamka weeraryahanka Manchester United, ka dib markii uu goolkiisa Everton barbaro 1-1 ah ku keenay Old Trafford.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Toffees ayaa dhameystiray kubad rogaal celis ah qeybtii labaad si uu u baajiyo goolkii furitaanka ee Anthony Martial ka hor inta aan la aadin nasashada isla markaana uu hubiyo in ciyaarta Premier League ay ku dhammaatay bar-baro.
30 jirkaan ayaa u dabaaldegay isagoo ku celceliyay sumcadda caanka ah ee Ronaldo oo ku orday calanka geeska, laakiin hadda wuxuu ku andacooday inaysan ula jeedin wax kale oo aan ahayn abaalmarin loo sameeyay ninka Red Devils.
Townsend ayaa u sheegay BT Sport: “Markaa ku dayato, waa calaamad ixtiraam u leh nin saameyn ku yeeshay xirfadeyda” .
Previous articleBar-barihii Manchester United ee Everton oo Xaqiiqooyin Cajiib ah laga diiwaan-galiyay
Next articleMuxuu R/Wasaare ROOBLE kala hadlay taliyeyaashii uu maanta la shiray? + Sawirro
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ka cabsi qabto mudaaharaadyo ka hor kulanka Premier League ee Liverpool. Bishii May, koox taageerayaal ah...
Su’aalo ka dhashay sida uu Abiy ula dhaqmay Farmaajo kadib caleemo-saarkiisa
Beesha caalamka oo war kasoo saartay khilaafka ta taagan hoggaanka NISA...
Ole Gunnar Solskjaer oo xaqiijiyay dhaawaca Soo gaaray Xidiga Anthony Martial